Izithuba zeofisi Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Malaysia
Khetha udidiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Villas Bungalows
IMalaysia ((mamela) mə-lay-zee-ə, -⁠zhə; isiMalay: [məlejsiə] lilizwe elikumazantsi mpuma Asia. Ubukhosi obumiselwe ngokomgaqo-siseko buquka amazwe alishumi elinesithathu kunye nemimandla emithathu yomdibaniselwano, yahlukaniswe nguLwandle lwase China lwaseMelika ibe yimimandla emibini, iPeninsular Malaysia kunye neBorneo's East Malaysia. IPeninsular Malaysia yabelana ngomhlaba kunye nemida yaselwandle kunye neThailand kunye nemida yaselwandle kunye neSwitzerland, iVietnam, neIndonesia. I-East Malaysia yabelana ngomhlaba kunye nemida yaselwandle kunye neBrunei kunye neIndonesia kunye nomda waselwandle kunye nePhilippines kunye neVietnam. I-Kuala Lumpur yidolophu enkulu yesizwe kunye nesona sixeko sikhulu ngelixa iPutrajaya isisihlalo soburhulumente. Ngabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-30, iMalaysia lelona lizwe linabantu abangama-44 emhlabeni. Eyona ndawo isezantsi ye-Yurasia yelizwekazi ikuTanjung Piai. KwiTropiki, iMalaysia lelinye lamazwe a-megadiverse ali-17, ikhaya leentlobo ezininzi zezilwanyana ezikhoyo. IMalawi inemvelaphi yayo kwizikumkani zaseMalaythi, ukususela kwinkulungwane ye-18, yaba phantsi koBukhosi baseBritane, kunye neBritish Straits Settlements protector. IPeninsular Malaysia yadityaniswa njengeManyano yaseMalawi ngo-1946. IMalaya yaphinda yahlaziywa njenge-Federation of Malaya ngo-1948 kwaye yafumana inkululeko nge-31 ka-Agasti ka-1957. UMalaya wamanyaniswa neNorth Borneo, iSarawak, neS Singapore ngomhla we-16 kaSeptemba ngo-1963 ukuya eMalawi. Ngo-1965, iSingapore yagxothwa kumanyano.ilizwe linamasiko ahlukeneyo kunye neenkcubeko ezahlukeneyo. Malunga nesiqingatha sabemi banesimilo ngokwaseMalay, ezincinci ezincinci zamaTshayina, amaIndiya kunye nabemi bomthonyama. Ngelixa kuthathela ingqalelo i-Islam njengenkolo yelizwe esekwe, umgaqo-siseko unika inkululeko yonqulo kwabo bangengomaMuslim. Urhulumente uvavanywa ngokusondeleyo kwinkqubo yepalamente yaseWestminster kwaye inkqubo yezomthetho isekwe kumthetho oqhelekileyo. Intloko yelizwe yinkosi ekhethiweyo, ebizwa ngokuba yiYang di-Pertuan Agong, ekhethwe kubalawuli bendlalifa yamazwe alithoba aseMalawi rhoqo kwiminyaka emihlanu. Intloko kurhulumente yi-Nkulumbuso. Emva kwenkululeko, iMalsian GDP ikhule nge-6.5% ngonyaka phantse iminyaka engama-50. Uqoqosho ngokwesiko lukhuthazwe yimithombo yobutyebi bayo kodwa luyanda kumacandelo ezenzululwazi, ezokhenketho, ezorhwebo kunye nezokhenketho kwezonyango. IMalaysia inorhwebo lwezoqoqosho olusandul 'ukukhula, lubekwe kwindawo yesithathu ngobukhulu eMzantsi-mpuma Asia kunye nama-33 ngobukhulu emhlabeni. Lilungu elisungule i-ASEAN, I-EAS, i-OIC kunye nelungu le-APEC, i-Commonwealth kunye ne-non-Allocation Movement.
Zonke iindidiIndawo yokuhlalaAmakhaya okuhlala